FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA MPANJAKA MPIANDRY MPANJAKA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana mpanjaka mpiandry mpanjaka
Twin Willows Mia an'ny Lpckingshepherd, aka Mia the King Shepherd amin'ny 2 taona— 'Mia no alika tsara indrindra nananako. Tena marani-tsaina sy mahatoky izy. Tiany fotsiny ny miaraka amin'ny fianakaviana ary tia mitaingina fiara. Misaotra Andriamanitra fa nijery an'i Cesar Millan aho. Tena nanampy ahy tamin'ny fampiofanana azy ho toy ny alika kely izany. Fiaraha-miasa, fiaraha-miasa, fanatanjahan-tena, fifehezana ary fiderana. '
kilalao vs mpiandry ondry aostraliana kely
Ny fananganana ny Mpanjaka Mpiandry Ondry dia lava lava, matanjaka ary hozatra matevina ny firafitra. Mifanaraka tsara amin'ny vatana ny loha ary somary malalaka eo anelanelan'ny maso. Ny handrina, hita avy eo aloha sy amin'ny mombamomba azy, dia somary boribory ihany, misy na tsy misy lohany medaly izay voafaritra tsara. Tsy feno loatra ny takolaka, somary miolakolaka, rehefa jerena avy any ambony dia tokony ho endrika 'V', ary feno tsara eo ambanin'ny masony. Ny sofina matevina sy mafy orina dia somary salantsalany ihany, somary malalaka ny fotony, apetraka ambony sy manondro izy ireo ary entina miarina sy somary mandroso (alika kely hatramin'ny 4-6 volana, ary indraindray lehibe kokoa, aza mitondra ny sofiny tanteraka atsangana). Ny maso dia somary salantsalany ary miendrika amandy, somary mirehitra fa tsy protuberant, araka izay azo atao mifanaraka amin'ny palitao manodidina amin'ny volontsôkôlà, ary avy amin'ny hazavana ka hatramin'ny maizina dia ekena. Lalina sy malalaka ny tratra. Volo matevina, ny rambony dia mahatratra ny hock farafaharatsiny. Ny rambony dia entina midina ary somary miolaka rehefa mientanentanana na mihetsika, ny alika dia mampiakatra ny rambony, izay lasa miolakolaka kokoa, nefa tsy mihoatra ny avo. Tsy tokony, ankoatr'izay, mandainga na miforitra ao an-damosina. Tsy azo ekena ny rambony mihidy. Boribory sy fohy ireo gadona miaraka amina arched tsara. Tena mafy ny pads. Fohy sy matanjaka ny hoho, mazàna miloko mainty. Matetika esorina ny lalàm-panala. Ny Mpanjaka Mpiandry dia tonga amin'ny loko maro azo ekena. Ireto misy toy izao: sable (volontsôkôlà volontsôkôla misy marika mavo na mainty, na volafotsy volondavenona misy marika mainty) lasely mainty misy marika tan, volamena, fanosotra, tan na volafotsy. Loko matanjaka sy manankarena ary loko no tena tian'ny olona. Azo ekena ny teboka fotsy kely eo amin'ny tratra. Ny loko fotsy, voasasa dia hadisoana lehibe. Ny akanjo lava dia tsy dia misy loko, afa-tsy amin'ny alika mainty. Alika fotsy, manga na miloko aty na alika misy orona tsy mainty dia tsy ekena amin'ny peratra fampisehoana. Ny alika kely dia miova loko hatramin'ny nahaterahany mandra-pahazoany ny palitao farany. Misy karazany roa ny palitao: volo maditra, izay mahitsy sy lava volo, izay maivana sy mikotrana.
Ny King Shepherd dia matoky tena amin'ny rafi-pitabatabana mandanjalanja ary tsy tokony ho saro-kenatra. Tena manan-tsaina sy mora zatra. Mahatoky sy dodona ny hampifaly ny tompony, ity karazana ity dia manao alika miasa mpiandry ondry. Famantaranandro be herim-po ary amboa mpiambina mampiseho ny herimpo sy ny hamafin'ny asany amin'ny maha-mpiaro azy, manome namana tsara izany. Ny Mpanjaka Mpiandry ondry dia feno tanjaka sy tanjaka. Sariaka amin'ny olon-tsy fantatra, ankizy ary biby hafa. Karazan-dehilahy mpankatò sy mpankato ary mora mihetsika ary manana tanjaka maro. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Io ihany no làlanao fifandraisana amin'ny alikanao mety ho fahombiazana tanteraka.
Hahavony: 25 - 29 santimetatra (64 - 74 cm)
Milanja: 90 - 150 pounds (41 - 69 kg)
Ny Mpanjaka Mpiandry dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Mahomby indrindra amin'ny tokotany lehibe farafaharatsiny.
Ny King Shepherd dia tia hetsika mavesatra, tsara kokoa raha ampiarahina amin'ny fampiofanana sasany, satria io alika io dia tena manan-tsaina ary maniry fanamby tsara. Mila raisina isan'andro, haingana, mandeha lavitra , mihazakazaka na mihazakazaka eo akaikinao rehefa mandeha bisikileta ianao. Raha tsy dia ampiasaina loatra ity karazana ity dia mety ho lasa tsy milamina sy manimba. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
Ankizy 6 ka hatramin'ny 10 eo ho eo
Ny palitao dia mahatohitra toetr'andro. Ny Mpiandry Mpanjaka dia tokony hosasana tsy tapaka. Mandrosoa raha tsy ilaina.
Ireo mpiompy alika amerikana Shelley Watts-Cross sy David Turkheimer dia namorona an'io karazana lehibe io avy amin'ny alika mpiandry alemanina amerikana sy eropeana, alaskan malamutes ary Great pyrenees. Niorina tamin'ny 1995 ny klioban'ny mpiompy ofisialy.
AKSC = Club Mpiandry Mpanjaka Amerikanina
NA = Fikambananan'ny Amerikanina tsy fahita firy
ERBDC = klioba alika atsinanana tsy fahita firy
SKC = Club Kennel an'ny fanjakana
Twin Willows Mia an'ny Lpckingshepherd, aka Mia the King Shepherd amin'ny 2 taona
Lil 'Red the King Shepherd, sary natolotry ny mpiandry ondry Mpanjaka's Acres King
Mpiandry Mpanjaka— 'Ilay alika ankavia dia vehivavy 20 volana antsoina hoe Windy, milanja 90 pounds sy 29' ny halavany. Eo ankavanana dia misy lehilahy iray 28 volana antsoina hoe Berrin, milanja 115 pounds sy 31 'lava eo amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny soroka.' Sary natolotry ny mpiandry ondry Mpanjaka's Acres King
'Ity sary ity dia nalaina teo alohan'ny kabinetra fametrahana habe mahazatra. Andro vitsivitsy monja dia saro-kenatra 12 taona ny alika kely. Powder Milk Bisquet an'ny Amy's Acres dia 34 lbs. ary ny sofiny dia mametaka ny vatasarihana faharoa amin'ny kabinetra, mba hanomezana ohatra ny halehiben'ireo Mpiandry ireo, na dia alika kely aza. Avy amin'ny fako Berrin / Lady ity alika kely ity. ' Sary natolotry ny mpiandry ondry Mpanjaka's Acres King
Polar the King Shepherd, sary natolotry ny mpiandry ondry Mpanjaka's Acres King
Grand Monarch Ch. Chateau De Chief's Bustah Bruin, fananan'i Shelley Watts-Cross sy George Cross, Chateau De Chief Kennels
Maja, alika kely Mpiandry Mpanjaka amin'ny 5 herinandro
Niko the King Shepherd puppy amin'ny 3 volana
Niko the King Shepherd puppy amin'ny 4 volana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ilay Mpiandry Mpanjaka
Sary Mpiandry Mpanjaka
labrador retriever mainty sy fotsy
rhodesian ridgeback cross gold retriever
sarin'i jack russell chihuahua mix
ohatrinona no azon'ny staff amerikanina terordan amerikana
ahoana no ahalalako raha mieritreritra ny alikako ny alika
alika karazany izay nahita ny sary